भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली: देखे पनि नदेखे जस्तै नगर्नुहोस ,पे’ट्रो”लियम् ट्यां’कर र बस ठो”क्कि’दा आ’ग\_ला’गी, ज’ले’र ५३ जनाको ज्या’न गयो, मनमा आलिकति पनि माया दया भए कमेन्ट मा #RIP लेखि मृ’त आ’त्मा लाइ श्र’द्न्द’जलि दिनुहोस !! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली: देखे पनि नदेखे जस्तै नगर्नुहोस ,पे’ट्रो”लियम् ट्यां’कर र बस ठो”क्कि’दा आ’ग\_ला’गी, ज’ले’र ५३ जनाको ज्या’न गयो, मनमा आलिकति पनि माया दया भए कमेन्ट मा #RIP लेखि मृ’त आ’त्मा लाइ श्र’द्न्द’जलि दिनुहोस !!
भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली: देखे पनि नदेखे जस्तै नगर्नुहोस ,पे’ट्रो”लियम् ट्यां’कर र बस ठो”क्कि’दा आ’ग\_ला’गी, ज’ले’र ५३ जनाको ज्या’न गयो, मनमा आलिकति पनि माया दया भए कमेन्ट मा #RIP लेखि मृ’त आ’त्मा लाइ श्र’द्न्द’जलि दिनुहोस !!
पेट्रोलिय पदार्थ बोकेको ट्यांकरसंग ठोक्किएर यात्रु बाहक बसमा आगलागी हुँदा हुँदा क्यामरुनमा ५३ जनाको जलेर ज्यान गएको छ। अन्य २९ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
बुधबार देशको मध्य पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने क्लिफ अफ डिस्चाङ भन्ने स्थानमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार दिउँसो साढे ३ बजे दुर्घटना भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनामा परेको बसमा ७० सिट रहेको थियो।
ट्यांकर र बस ठोक्किए लगतै बसमा आगलाी भएको हो। दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरूको शव जलेकाले पहिचान गर्न कठिन भएको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरका चालकले नियन्त्रण गुमाएकाले दुर्घटना भएको देखिएको छ।
यो खबर पनि = सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–९ की ४१ वर्षीया महिला चार वर्षदेखि यौ’ ‘न तथा श्र’म’शो’ष’ण’मा परेको घ’ट’ना बाहिरिएको छ।
छिमेकी ६८ वर्षीय खड्गबहादुर राईले रु छ हजार ऋ’ण दिएपछि बारम्बार श्रमसँगै यस्तो कार्य ग’र्ने गरेको पी’डित महिलाको भनाइ छ।
शनिबार सल्लेरीमा पत्रकारहरूसँगको भेटमा ती महिलाले आफू अ’न्या’यमा परेकाले न्याय माग्न सदरमुकाम आइपुगेको बताएकी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले २०७३ साल असार दुई गते खड्गबहादुरबाट ऋ’ण लिएको पी’डि’त महिलाको भनाइ छ।
‘ऋ’ण लिएलगत्तै असार चार देखि मलाई उहाँको घरमा बारम्बार काम गर्न बोलाउन थाल्नुभयो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उहाँले जे भन्यो त्यही मान्न बा’ध्य भएँ,’ उनले भनिन्। घरायसी कामसँगै तीन/चार दिनको अन्तरमा उनले स ‘म्प’र्क रा’ख्ने गरेको ती महिलाको भनाइ छ।
‘ऋ’ण’को ब्याजस्वरूप काम गर्नुपर्ने। दिनभरि कामको थकानसँगै उसलाई यौ’ ‘न चाहना भए जुनैबेला पनि आफू त यार हुनुपर्ने मेरो बा’ध्य’ता थियो,’ उनले भनिन्। आफूले इ’च्छा ‘छैन भन्दा ज्या’ ‘न मा’ ‘र्ने’स’म्म’को ध’ ‘म्की दिएपछि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताइन्।
गाउँघरमा जो कोहीलाई दिएर खड्गबहादुरले गर्ने गरेको पी’डि’त महिलाको आ’रो’प छ तर पी’ड’क राईले भने आफूले त्यस्तो कुनै पनि हालतमा नगरेको बताए।
पी’ड’क राईले २०७५ सालदेखि भने निरन्तर स’ह’वा’स गरेको पी’डि’त महिलाले बताएकी छन्। पीडित महिलाको ७० वर्षीय श्रीमान् गोठमा भएको मौकामा घर आउने र स’ह’वा’स ग’र्ने ग’रेको महिलाको भनाइ छ।
खड्गबहादुरको व्यवहारको विषयमा पी’ ‘डि’त’को पतिलाई जानकारी भएपछि काम गर्न नजाने निधोमा पुगेकी उनलाई खड्गबहादुरले त’त्का’ल ऋ’ण फिर्ता गर्न ता’के’ता गरेका थिए।
तर आफूहरुसँग फिर्ता गर्ने रकम नहुँदा बा’ ‘ध्य भएर अ’ह्राएको काम गर्नुपरेको महिलाको भनाइ छ।
खड्गबहादुर र पी’डि’त महिला बीचको स’म्ब’न्धका बारेमा पी’ड’कको घरपरिवारलाई जानकारी भएपछि छोराहरु समेतले गत माघ २८ गते महिलाको घरमा पुगेर स’कि’दि’ने ध’ ‘म्की दिएको आ’रो’प छ।
घर घे’ ‘र्न पुगेपछि पति र घरपरिवारसहित छिमेकीलाई समेत घ’ट’नाको बारेमा जानकारी गराएको महिलाको भनाइ छ। महिला सञ्जालको सहयोगमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता सामान्य वि’वा’द हुँदा समेतछिमेकी सबैलाई दिने खड्गबहादुर देखि गाउँले सबै ड’रा’उ’ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
आफूहरु पनि अ’सुरक्षित हुने त्रा’स’का कारण गाउँका महिला अगुवाको साथमा घटनाको विषयमा उ’जु’री गर्न सल्लेरी आएको पी’डित महिलाले बताइन्।
जिल्लामा क्रियाशील अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको सहयोगमा गत फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुमा मु’द्दा द’र्ता गरिएको पी’डि’त पक्षको भनाइ छ।
प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सोही दिन खड्गबहादुरलाई प’क्रा’उ गरी का’र’वा’ही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालले जानकारी दिए।
यता पी\_डित पक्षले भने आफूहरुलाई अदालतमा बयानका लागि नबोलाएको गुनासो गरेका छन्। पी’ड’क पक्षको मात्रै बयानका आधारमा ध’रौ’टी’मा रि’हा भएपछि न्याय नपाउने आ’श’ङ्का आफूहरुमा रहेको पी’डि’त महिलाको भनाइ छ।
अब झनै ज्या’ ‘न जो’खि’म’मा परेकाले गाउँ फर्कन नसक्ने पी’ ‘डि’त परिवारको गुनासो छ। पतिसँगै आफू सल्लेरीमा आफन्तकोमा बसिरहेको र सात जना छोराछोरी गाउँमै छिमेकीको घरमा बसेको उनको भनाइ छ